डेढ महिनामा तामाकोसीको सेयर, डि–म्याट खोल्नुभयो ? - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
डेढ महिनामा तामाकोसीको सेयर, डि–म्याट खोल्नुभयो ?
माघ १९, २०७४ 13349 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर कम्पनीले आगामी अबको डेढ महिनाभित्र सर्वसाधारण तथा स्थानीयका लागि सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । दोलखामा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न स्थानीय तथा सर्वसाधारणलाई छुट्ट्याएको क्रमशः १० र १५ प्रतिशत साधारण सेयर जारी हुन लागेको हो ।
सेयर निष्कासन गर्न माघभित्र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत आउने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार फागुन अन्तिम साता वा चैत पहिलो साताभित्र सेयर निष्कासन गरेर बाँडफाँड गर्ने योजना छ ।
आयोजना प्रभावित स्थानीयले जारी पुँजीको १० प्रतिशत (१ अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ) १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता र १५ प्रतिशत (१ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ) १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता सेयर पाउनेछन् ।
सेयर भर्न हरेक व्यक्तिकाे डिम्याट खाता हुनुपर्छ । याे खाताबिना सेयर भर्न पाइँदैन । यसर्थ कम्पनीले सर्वसाधारणलार्इ यस्ताे खाता बेलैमा खाेल्न पनि अाग्रह गरेकाे छ ।
स्थानीयलाई अतिप्रभावित, प्रभावित र कम प्रभावित गरी ३ श्रेणीमा विभाजन गरेर सेयर वितरण गरिनेछ । गौरीशंकर गाउँपालिकाको लामाबगर र गोंगर अतिप्रभावित, प्रवेश मार्ग तथा प्रसारण लाइनले छोएको प्रभावित र कतै नछोइएको क्षेत्र कम प्रभावितमा राखिएको छ । स्थानीयले ३० देखि ३ सय कित्तासम्म सेयर भर्न सक्नेछन् ।
कूल परेको आवेदनको आधारमा ३ प्रतिशत अतिप्रभावित, १४ प्रतिशत प्रभावित र १ प्रतिशत सेयर कम प्रभावितले पाउनेछन् । प्राप्त आवेदनका आधारमा सेयर बाँडफाँडको टुङ्गो लाग्नेछ ।
कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा स्थानीयलाई छुट्ट्याइएको सेयर जारी गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, स्थानीय तह निर्वाचनपछि जिल्ला समन्वय समितिको गठनमा भएको ढिलाई र धितोपत्र बोर्डको नियमावली संशोधन हुँदा समय लम्बिएको हो ।
यसअघि माघभित्र सेयर जारी गरी फागुनसम्म बाँडफाँड गर्ने योजना थियो । सुरुमा स्थानीय र पछि सर्वसाधारणका लागि १५ प्रतिशत सेयर निष्कासन हुनेछ । कम्पनीले यसअघि कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी, आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीका छुट्ट्याएको २४ प्रतिशत सेयर बाँडफाँड गरेको छ ।
सञ्चयकर्ता, ऋण लगानी गर्ने संस्था, प्राधिकरणका कर्मचारी र स्थानीयका लागि सेयर जारी गर्न बोर्डबाट एकै पटक स्वीकृति लिइएको थियो । तर, रोल्वालिङ खोलाको पानी मिसाएर थप विद्युत् उत्पादन गर्ने योजनापछि स्थानीय र सिभिल ठेकेदार सिनो हाइड्रोमा कार्यरत कर्मचारीले पनि सेयर पाउनुपर्ने भन्दै विरोध गरेका थिए ।
विरोधका कारण त्यतिबेला स्थानीयका लागि छुट्ट्याइएको सेयर निष्कासन रोकिएको थियो । समयमा निष्कासन नहुँदा कम्पनीको पुँजी परिचालन र आयोजनाको खर्च व्यवस्थापनमा समस्या सुरु भएको छ । सेयर जारी गरेर २ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने लक्ष्य छ ।